Momba anay - Baoding Lekai International Ltd.
Tamin'ny 24 desambra 1953, ny fivorian'ny governemanta faha-199 an'ny filankevi-panjakana dia nanao "fanapaha-kevitra momba ny fananganana tambajotra projet film sy indostrian'ny sarimihetsika" ary nanapa-kevitra ny hanangana orinasa mpamokatra sarimihetsika any Shina.
Tamin'ny 1 Jolay 1958, novinavinaina ny vaky tany tany amin'ny tanàna Baoding, Provinsi Hebei. Ny anaran'ny orinasa voalohany, Baoding Filmstrip Factory, dia nomena.
Tamin'ny 1 Jolay, ny atrikasa Workshop 101 dia napetraka tamin'ny famokarana ary nanamboatra ny andiany voalohany ny sary miabo fotsy sy fotsy any Chine, miaraka amin'ny 427,000 metatra novokarina tamin'io taona io. Nahomby tamin'ny famokarana sarimihetsika fakana sary tamin'ny volana Aogositra ary sarimihetsika 135 tamin'ny Oktobra.
Tamin'ny 1969, nanomboka naondrana ny sarimihetsika tsara fotsy sy fotsy, ny fatiantoka mainty sy fotsy, ary ny fanaratsiana horonantsary.
Tamin'ny 1972, nanomboka naondrana ny sarimihetsika mainty sy fotsy ary ny sary mihetsika haingam-pandeha (HD-5).
Tamin'ny 1974, nanomboka naondrana ireo sarimihetsika tsara sy fotsy ary sarimihetsika misy habakabaka.
Tamin'ny 1977, nanomboka naondrana ny kasety sarimihetsika sy ny sarimihetsika miloko tsara.
Tamin'ny 1981, nanomboka naondrana ireo sarimihetsika miorina amin'ny loko solvent.
Tamin'ny 1985, nanomboka naondrana ireo sarimihetsika ratsy loko.
Tamin'ny taona 1986, 120 135 ny sarimihetsika mainty sy fotsy no nanomboka naondrana.
Tamin'ny taona 1993, China Lucky Film Group Corporation dia nahazo alalana amin'ny fitantanana sy ny fanondranana entana avy amin'ny governemanta Administrations, mandritra izany fotoana izany dia natsangana ny Sampana Import sy Export.
Tamin'ny 22 Janoary 1998, Lucky Film dia voatanisa tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Stock Exchange Shanghai. Lucky Film Co., Ltd, ny orinasan'ny China Lucky Film Corporation dia natsangana.
1 aprily 2011, Baoding Lekai International Ltd. natsangana taorian'ny nanovan'ny China Lucky Film Corporation Import and Export Branch Company. Orinasa voafetra voafetra miaraka amin'ny zon'ny mpivarotra fanafarana entana sy fanondranana tsy miankina ary toetra ara-dalàna tsy miankina tantanan'ny China Lucky Film Corporation.
Hatramin'izao, ireo mpanaparitaka an'i Lucky any ampitan-dranomasina dia any Asia, Amerika, Eropa, Afrika, ary efa nanangana sampana any Azia atsimo, Afrika sy Afovoany Atsinanana, Amerika atsimo sy faritra lehibe hafa. Vokatra fakana sary tsara vidy, vokatra ara-pitsaboana, vokatra angovo vaovao, ary fitaovana fanaovana sary mihetsika manokana dia amidy amina firenena sy faritra maherin'ny 80 eto an-tany. Eo amin'ny sehatry ny asa fanafarana dia mitazona fifandraisana tsara amin'ny mpamatsy mihoatra ny 20 amin'ny firenena 10 mahery izahay.
Manantena ny hiara-miasa aminao izahay.